PMC Vihara, 7505 Fairport Rd, Dallas, TX (2021)
Home > United States > Dallas, TX > PMC Vihara
Paññāvāsa Dhamma Vihara is the first and foremost Burmese Theravada Buddhist Meditation Center anda501c3 non-profit organization serving Dallas/Fort Worth area communities since July 2013. The meditation center sits on 10+ acres of land surrounded by trees providing natural tranquility and peacefulness essential for meditation.
July 18th 2021, Sunday
DFW Food Fair : 9850 Walnut St , Dallas.
Benefits will go to People in Myanmar
မြန်မာ အစားအစာမျိုးစုံ စားသုံးရျ် မြန်မာပြည်ကိုကူညီနိုင်ပါပြီ။
ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲ
* ဗုဒ္ဓဝင် ဘုရားရှစ်ခိုးလင်္ကာ
* မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး ပတ္ထနာမှု သစ္စာပြု အမျှဝေခြင်း
*အောင်ခြင်းကြီး ရှစ်ပါးမင်္ဂလာ ပါဌိ နှင့် ရှစ်လုံးဖွဲ့ ကဗျာ ( အပြင်အောင်ခြင်း ရှစ်ပါး)
*အတွင်းအောင်ခြင်း ( ကိလေသာအလုံးစုံ ပယ်သတ်ခြင်း)
ဗုဒ္ဓနေ့ ဆုတောင်းပွဲ ရွတ်ဆိုရန်
* ဗုဒ္ဓဝင် ဘုရားရှိခိုးလင်္ကာ
*အောင်ခြင်းကြီး ရှစ်ပါးမင်္ဂလာ ပါဠိ နှင့် ရှစ်လုံးဖွဲ့ ကဗျာ
* မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး ပတ္ထနာမှု သစ္စာပြု အမျှဝေပွဲ
Dr ယဥ်ထွေးဦး နှင့် Dr ခွန်ကြည်ထွန်း တို့၏ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး Dr ဦးမင်းဦး (ပါမောက္ခ ဋ္ဌာနမှူးငြိမ်း ကလေးဆေးပညာဋ္ဌာန ၊ဆေးတက္ကသိုလ် မန္တလေး ) အသက် ၇၆နှစ် သည် မေလ ၁၅ရက် ၂၀၂၁ နံနက် ၈:၃၀ ၌ Sacramento , California မြို့၌ ဘဝသစ်သို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။
ကျန်ရစ်သူချစ်ဇနီး ဒေါ်ထားထားဆွေ နှင့် သားသမီးများ ကိုတင်ထွန်းဦး၊ မလှမျိုးဦး၊ ကိုတင်မင်းနိုင်၊ ကိုတင်မင်းထွဋ္ဌ်၊ Drတင်နွယ်ဦး ၊ Drယဥ်ထွေးဦး၊ကိုကျော်မင်းထက် တို့က မေ၁၉ ရက်၂၀၂၁ ၌ မိသားစု Funeral event ပြုလုပ်ပါမည်။
ရက်လည်ဆွမ်းကို ElkGrove နေအိမ်၌ မေ၂၁ သောကြာနေ့ မှာ၎င်း၊ Sacramento သာသနာ့ဂုဏ်ရည်ကျောင်း၌ မေ၂၂ရက် စနေနေ့မှာ၎င်း ကပ်လှူပါမည်။
ပညာဝါသဓမ္မရိပ်သာမိသားစု ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့က ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့ နှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းရပါသည်။
Drဦးမင်းဦး မြင့်မြတ်သောဘုံဘဝ၌ ငြိမ်းချမ်း
ပညာဝါသ ဓမ္မရိပ်သာ မိသားစုများ
Inviting you to Buddha Day ( Bodhi Day) Celebration at Dallas Monastery
ဗုဒ္ဓ၏ ဂုဏ်ကျေးဇူးတို့ကို ပူဇော်မည့် ကဆုန်လပြည့် ဗုဒ္ဓနေ့ ပွဲ သို့ ကြွရောက်ကြပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
တရားသောတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေကြသည့်မြန်မာပြည်သူတို့အတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာများက ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ သစ္စာဆို အမျှဝေမှာမို့ မပျက်မကွက် တက်ရောက်ကြပါရန် နှိုးဆော်ပါရစေ။
10:30AM , May 23 2021 , Sunday
Texas ပြည်နယ် Dallas မြို့နေ Dr ကျော့ဝင်းရွှင် နှင့် Dr ကျော်ကျော်စိုး၊ ဂျပန်နိုင်ငံနေ ကိုစိုးမိုးရွှင်နှင့် Sato Izumi San , ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်နေ ကိုမိုးကျော်ရွှင်နှင့် ပိုးအောင်ကြီး တို့၏ ကျေးဇူးရှင် မိခင်ကြီး ၊( ဦးမြင့်ရွှင်) ၏ချစ်ဇနီး ၊ Sato Linn , Alec , Ashten တို့၏ ဖွားဖွားကြီး "ဒေါ်ထွေးထွေး" သည် ဧပြီလ ၂၀ရက် ၂၀၂၁ ညနေက ဒဲလပ်စ် မြို့နေအိမ်တွင် ဘဝတပါးသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။
တူမများ ဒေါ်ခင်အေးကြူ နှင့် ဦးမောင်မောင် (မန္တလေး)၊ ဒေါ်မီမီခင် နှင့် (ဦးအောင်မျိုးထွန်း) (ရန်ကုန်)၊ တူ အောင်နိုင်ဝင်း(ရန်ကုန်)၊ မြေးများ ကျော်မင်းဦး၊ သင်ဇာမောင်မောင် နှင့် ဖြိုးဝေသက်၊ မြစ်များ သဒါလင်းလက်၊ မြတ်မင်းခန့် တို့ဖြစ်ပါသည်။
မီးသင်္ဂြိုလ်မည့်ရက်ကို မိသားစုမှ အသိပေးပါမည်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေများ က ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့ နှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းရပါသည်။
မိခင်ကြီး ဒေါ်ထွေးထွေး မြင့်မြတ်သော ဘုံဘဝသို့ ရောက်ရှိပါစေ။
Daw Htwe Htwe , beloved wife of ( U Myint Shwin ,Yangon ) , beloved mother of Ko Soe Moe Shwin & Sato Izumi San ( Japan), Dr Kyawt Win Shwin & Dr Kyaw Kyaw Soe (Dallas ,Texas ), Ko Moe Kyaw Shwin & Poe Aunggyi ( Florida) , beloved grandmother of Sato Linn , Alec Shwin & Ashten Shwin , Wonderful aunt of Daw Khin Aye Kyu & U Maung Maung (Mandalay), Daw Mi Mi Khin & (U Aung Myo Tun) (Yangon), U Aung Naing Win ,Grandaunt of Kyaw Min Oo, Thin Zar Maung Maung & Phyo Wai Thet, Great grand aunt of Thadar Lin Lett, Myat Min Khant:
passed away on Wednesday, April 20 2021 at Dallas home . Cremation date will be announced later by family .
Our deepest sympathies going out to Ko Soe Moe Shwin , Dr Kyawt Win Shwin , Ko Moe Kyaw Shwin & rest of family.
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ကျဆုံးသွားကြရှာသော မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအာဇာနည်များ အား
မြန်မာနှစ်ဆန်းမှာ ကုသိုလ်ပြု ၊ မေတ္တာပို့ ၊ သစ္စာဆိုခြင်း ။
ဆရာတော် သံဃာတော် အရှင်မြတ်အား ဆွမ်း ခဲဘွယ်ဘောဇဥ် ချိုချဉ် ရသာ အဖြာဖြာတို့ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါသည်။
ဤကုသိုလ်ကံတို့သည် မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး၌ ကျဆုံးသွားကြသော အာဇာနည် သူရဲကောင်းတို့ထံ ရောက်ရှိပါစေ၊ ရကြပါစေ။
ဘုန်းတော် ကံတော် ညာဏ်တော်အနန္တ အတိုင်းမရှိ သော ဂုဏ်တော်တို့နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော မြတ်စွာဘုရား အား ဆွမ်းဟင်း သစ်သီးဘောဇဥ် ပန်းနံ့သာ တို့ဖြင့် ကပ်လှူပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်၏ အကျိုးကို
မြန်မာ့ နွေဦးတော်လှန်ရေး၌ ကျဆုံးသွားကြရှာသော သူရဲကောင်းတို့ထံ ရောက်ပါစေ၊ ရကြပါစေ။
" Myanmar New Year Blessing & Praying Ceremony"
မြန်မာနှစ်သစ်ကူး ကုသိုလ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသား ဝန်ထမ်းတို့၏ CDM ( Civil Disobedience Movement ) အတွက် PMC မိသားစု နှင့် မိတ်ဆွေများက တတပ်တအား အထောက်အကူ ပြုကြပါစို့ ။
" ဓမ္မာရုံ နှစ်ဦး အလှူတော်"
Dr ဦးကျော်တင့် (California ) မိသားစုက သဒ္ဓါတရားထက်သန်စွာဖြင့် ဓမ္မာရုံ တည်ဆောက်ရာတွင် 10,000$ လှူဒါန်းပါသည်။
အလှူ့ရှင် မိသားစုသည် ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာရျ် လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ကာ ရည်ရွယ်သောပန်းတိုင်သို့ လျင်မြန်စွာရောက်ရှိပါစေ။
" ယခု အချိန် တွင် သက်ရှိ မြတိစွာ ဘုရားနှင့် သံဃာတော် များအား ကိုယ်တိုင် ဆွမ်းဆက်ကပ် လှုဒါန်းခြင်း အဖို့ ငှာ ကုသိုလ်မပြု နိုင်တော့ပြီ။
သို့သော် သံဃိက ကျောင်း အလှုပြု နိုင်သေးသည်။ ဤကုသိုလ် သည် သက်တော်ထင်ရှား ဘုရား မြတ် စွာအား ကိုယ်တိုင် ဆွမ်း ဆက် ကပ် ခြင်းထက်ပင် ကြီး မြတ် ပေ၏ ။"
Pannavasa Meditation Center (PMC) is raising funds to buildanew Dhamma Hall ဓမၼာရုံ. PMC is the first and foremost Burmese Theravada Buddhist Monastery anda501(c)(3) Non-profit Organization serving Dallas/Fort Worth area communities since July 2013. Please check the photos in this album for detailed information about the project.
Interested donors may contribute any amount or in unit of square feet at 100 US$ per sq ft by check payable to PMC (or) transfer with Zelle / Bank of America to [email protected]. Please write "Dhamma Hall" in Memo. Your generous donations will be greatly appreciated.
" ယခု အခ်ိန္ တြင္ သက္ရွိ ျမတိစြာ ဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္ မ်ားအား ကိုယ္တိုင္ ဆြမ္းဆက္ကပ္ လႈဒါန္းျခင္း အဖို႔ ငွာ ကုသိုလ္မျပဳ ႏိုင္ေတာ့ၿပီ။
သို႔ေသာ္ သံဃိက ေက်ာင္း အလႈျပဳ ႏိုင္ေသးသည္။ ဤကုသိုလ္ သည္ သက္ေတာ္ထင္ရွား ဘုရား ျမတ္ စြာအား ကိုယ္တိုင္ ဆြမ္း ဆက္ ကပ္ ျခင္းထက္ပင္ ႀကီး ျမတ္ ေပ၏ ။"
ဆွမ်းအလှူရှင်များ ကုသိုလ်ပွားရျ် ကျန်းမာ ချမ်းသာ ကြပါစေ။
မစိုးရိမ်တိုက်သစ်မှာ ဆွမ်းကပ်လှူသော အချို့နေ့ရက်များ၏ ပုံရိပ်များတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
" 2021 နှစ်ဦး၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်သံဃဒါနဆွမ်းအလှူ"
(၁) Jan 1st, မှ Jan 17th, 2021 အထိ (ရက်နှစ်ပတ်) စုပေါင်းသံဃဒါနဆွမ်းအလှူ ပညာဝါသဓမ္မရိပ်သာကျောင်း၊ Dallas, Texas က လက်ခံခဲ့ပါသည်။
(၂) အမေရိကန်၊ ကနေဒါ နိုင်ငံရှိ မြန်မာ ဗီယက်နန် ဗုဒ္ဓဘာသာမိသားစုများက ထက်သန်သော သဒ္ဓါ, ရက်ရောသော စေတနာတို့ဖြင့် ပါဝင်လှူဒါန်းကြသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ အတိုင်းထက်အလွန် ဝမ်းသာကြည်နူးရပါသည်။
(၃) ဗီယက်နန်မိသားစုများ၏အလှူသည် $10,020. ဖြစ်ပြီး, မြန်မာမိသားစုများ၏ အလှူကား $21,530. ဖြစ်ပါသည်၊ စုစုပေါင်း အလှူမှာ-$31,550 ဖြစ်ပါသည်၊ ရွှေဘိုပေါ်ဆန်းမွှေးဆန် ၂-တန် (တစ်တင်းခွဲအိတ်၄၀) နှင့်၊ မြန်မာငွေတန်ဘိုး သိန်း လေးရာကျော်ဖြစ်ပါသည်။
(၄) အဆိုပါလက်ခံရရှိအလှူအားလုံးကို Jan 18, မှ Jan 22, 2021 (ငါးရက် အတွင်း) မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်သို့ ပေးပို့ လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပါဝင်လှူဒါန်းကြသည့် အလှူရှင်မိသားစုများ သုခိတာ ဟောထ- ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ချမ်းသာကြပါစေ။
မင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်၂၀၂၁ မှာ အတူတကွ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြပါစို့။
နှစ်သစ်ကုသိုလ်အဖြစ် မန္တလေး မစိုးရိမ်တိုက်သစ် သံဃာတော်အပါး ၉၀၀ အား ကာလဒါန ဆွမ်းအလှူကုသိုလ် ပြုကြပါရန် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
November 22 2020 နေ့က ကျင်းပ ပြီးစီးခဲ့သော
ပညာဝါသဓမ္မရိပ်သာကျောင်း၏ ကထိန်ပွဲ၌ ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်လှူသူများ ၊ ဓမ္မာရုံ ၊ သံဘန်းခြံစည်းရိုး လှူဒါန်းသူများ နှင့် သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားဆွမ်း စားဘွယ် ၊ပစ္စည်းလေးပါး နဝကမ္မကပ်လှူသူ အပေါင်းတို့၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓု ခေါ်ဆိုပါသည် ။
လူကိုယ်တိုင်လာရောက် ဆက်ကပ် လှူဒါန်းသူများ ၊ အဝေးမှ လှူဒါန်းသူများ၊ Zoom online မှတက်ရောက်သူများအား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါသည်။
ကထိန်ခင်းပြီးဖြစ်ပါရျ် ယခုနှစ်ကထိန်သင်္ဃန်း ကပ်လှူ ခြင်း မပြုနိုင်တော့ပါ။
အခြားသောလှူဒါန်းဖွယ်ရာများကို အောက်ပါအတိုင်း လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Zelle Account: on line donation
name: Pannavasa Meditation Corporation
Photos from Paññāvāsa Dhamma Vihara's post
8th Kathina Ceremony "going on now"
In Person with masks & Social Distancing.
Zoom ID: 871 757 7072
Dallas ကျောင်း ကထိန်ပွဲ သို့
Social Distancing , Masks များတပ်ရျ် ကထိန်သင်္ကန်း ကပ်ဖိတ်ပါသည်။
သီတဂူကျောင်း ဆရာတော်ငါးပါး ကြွလာပါရျ် ဆရာတော် ၆ပါးရှိပါမည်။
Zoomမှ ကပ်လှူလိုသူ များအတွက် Zelle မှ Memo မှာ အလှူရှင်အမည် ၊ အကြောင်းအရာရေးရျ် အလှူငွေ ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ပညာဝါသ ဓမ္မရိပ်သာ ကျောင်း ဝန်ဆောင် အဖွဲ့
8th Kathina invitation
[10/25/20] ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်တို့အား သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ညနေ ဆီမီးထွန်းညှိရျ် မြတ်စွာဘုရားအား စုပေါင်းပူဇော်ကြရန် ပညာဝါသဓမ္မရိပ်သာကျောင်းမှ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
ကျန်းမာသူ လူရွယ်လူလတ်များ Mask တပ်ရျ်လာကြပါရန် ၊ လာမည့်စာရင်းကို ဆရာတော်အား လျောက်ထားကြပါရန်၊
အဝေးမှ ဓမ္မမိတ်ဆွေများနှင့် လူကြီးများ Quaratine နေရမည့် မိတ်ဆွေများ မိမိနေအိမ်Zoom မှ ဝင်ရောက် ပူဇော် ကြပါရန်၊
နိဗ္ဗာန် အကျိုးမျှော် နှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Texas ပြည်နယ် Belton မြို့နေ ဦးVictor Gaw
နှင့် Dr မြင့်မြင့်အေးတို့၏ ကျေးဇူးရှင် မိခင်ကြီး "ဒေါ်ခင်မြင့်" သည် စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက် ၂၀၂၀ နေ့ က California , Fremont မြို့တွင် ဘဝ တပါးသို့ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။
ပညာဝါသဓမ္မရိပ်သာ ဆရာတော် နှင့်
ဓမ္မမိတ်ဆွေများ က ဦး Victor ၊ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတို့ နှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းရပါသည်။
မိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်မြင့်သည် မြင့်မြတ်သော ဘုံဘဝသို့ ရောက်ရှိပါစေ။
Daw Khin Myint , beloved mother of Victor Gaw & Dr Myint Myint Aye from Belton, Texas , passed away on Thursday, Sep 17 2020 in Fremont , California. Our deepest sympathies going out to Victor Gaw & rest of family.
Temple မြို့နေ Dr ယုယုခင်နှင့် Dr မျိုးအောင် ၏ ကျေးဇူးရှင် ဖခင်ကြီး "ဦးကြင်တင့် " သည်စက်တင်ဘာ ၈ရက်နေ့ နံနက်က ရန်ကုန်မြို့တွင် ဘဝ တပါးသို့ ကူးပြောင်း သွားပါသည်။
ပညာဝါသ ဓမ္မ ရိပ်သာ ဆရာတော် နှင့်
ဓမ္မမိတ်ဆွေများ က ကျန်ရစ်သူ မိသားစုနှင့် ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းရပါသည်။
ဖခင်ကြီး ဦးကြင်တင့် မြင့်မြတ်သော ဘုံဘဝ ရောက်ရှိပါစေ။
U Kyin Tint , beloved father of Dr Yu Yu Khin & Dr Myo Aung from Temple Texas , passed away at age of 87 on 3: 25 am, Sep 8, 2020 in Yangon, Myanmar. Our deepest sympathies going out to Dr Yu Yu Khin & rest of family.
မြင်းခြံမြို့ သာသနာ့ဇောတိကာရုံ ကျောင်းတိုက် ၏
၁)နာ ယက၊ စာချ၊ စာသင် သံဃာတော်များအတွက် ရေစင်၊ ရေလှောင်ကန်၊ ရေသန့်စနစ် အတွက် အလှူငွေ
၂)ရေရှည် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ပဒေသာပင် အလှူငွေ
ကျန်းမာရေး ပဒေသာပင် အလှူငွေ
စုစုပေါင်း ၁၇,၀၀၀ $နှင့်
ဒေါ်မုဒိတာ မိသားစုမှ ဝါတွင်း ဆွမ်းဒါန အလှူ ငွေ ၇၀၀$ အပါအဝင်
စုစုပေါင်း မြန်မာငွေ ၂၃၇ သိန်းကျော်
ကို ပေးပို့ လှူဒါန်း ပြီးစီး ပါကြောင်း ။
အားလုံး ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓု ခေါ် ဆိုကြပါ။
ရေစစ်အလှူ ၊ ဆေး အလှူ ကြောင့် လက်ရှိဘဝမှာပင် ဒီဃာ ယုက အသက်ရှည် ကျန်းမာ ခြင်း အကျိုးကို ဒိဋ္ဌ ဓမ္မ ရရှိပါသည်။
ပါဝင် လှူ ဒါန်းသူ ကုသိုလ် ရှင်များ အားလုံး ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
ပညာ အရိပ် Charity group
Paññāvāsa Dhamma Vihara is the first and foremost Burmese Theravada Buddhist Meditation Center anda501c3 non-profit organization serving Dallas/Fort Worth area communities since July 2013. The meditation center sits on 10+ acres of land surrounded by trees providing natural tranquility and peacefulness essential for Mindfulness meditation.